“ကိုအောင်ဆန်းဦး၊ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းသို့ပေးစာ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “ကိုအောင်ဆန်းဦး၊ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းသို့ပေးစာ”
Posted by Knowledge Seeker on Jun 24, 2012 in Copy/Paste | 31 comments
အမေရိကားက ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အိမ်ကြီးထဲမှာ ခင်ဗျား ရှန်ပိန်သောက်ရင်း အလုပ်ကိစ္စတွေအပြင် ခင်ဗျား အမွေလုနေတဲ့ မြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအိမ်အကြောင်း စဉ်းစားနေမလား မပြောတတ်ဘူး။ ကျနော်တခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ အိမ်ကို ခမ်းနားကြီးကျယ်တယ်လို့ ရဲရဲကြီး သုံးလိုက်တာက မြန်မာပြည်က မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ခင်ဗျားဇနီး ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေထဲက တပုဒ်ကြောင့်ပါ။ ကျမအမျိုးသားက အိမ်တလုံး ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အဲဒီလမ်းဒီလမ်းထဲမှာ ရပ်ထားတဲ့ ကားတွေဟာကားစုတ်တွေဆိုရင် အဲဒီအိမ်ကိုမဝယ်ဘူးတဲ့။ ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း ခေါ် ကလောင်ရှင် မေတ္တာဦးက သူ့အမျိုးသားရဲ့ အဆင့်အတန်း ခွဲခြားတတ်ပုံကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ရေးထား ပါတယ်။ အမေရိကားက `ကားစုတ်´ဆိုတာ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်က ချုံးချုံးကျ ကားအိုကြီးတွေလိုတော့ ဟုတ်မယ် မထင်ဘူး။ ဒီလိုကားမျိုးဆို ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံမှာ လမ်းပေါ်တောင် ရဲက အရောက်မခံဘူး ထင်တာပ။ဲ အလုပ်ကြမ်းသမားတွေ၊ ကျောင်းသားလေး တွေတောင် အရစ်ကျ ငွေချေစနစ်နဲ့ ကားသစ်တစီး ဝယ်နိုင်တဲ့ ခင်ဗျားနိုင်ငံမှာ ခင်ဗျားမကြိုက်တဲ့ ကားစုတ်ဆိုတာ ဘယ်လိုကားမျိုးလဲ ကျနော်တို့ မှတ်သားရအောင် ခင်ဗျားဇနီးကို နောက်ဆို ဓာတ်ပုံပါ ရိုက်ပြီး ဖော်ပြပေးဖို့ ပြောပေးပါဦးဗျာ။ အမေရိကားမှာ ကားစုတ်ပဲ ဝယ်နိုင်တဲ့ လူတွေကို အိမ်နီးချင်း တော်ရမှာ စိုးလို့ ဒီလိုလူမျိုးတွေ ရှိတဲ့ လမ်းထဲက အိမ်ဆိုရင်တောင် ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း မဝယ်ဘူးဆိုတဲ့ ခင်ဗျားက မြန်မာပြည်က အိမ်စုတ်တလုံးကို ဘာလို့များ အမွေလုနေရတာလဲ ကိုအောင်ဆန်းဦးရေ။ ကျနော်တို့ အဘွားကြီးနေတဲ့ အဲဒီ တိုက်အိုကြီးကို ခင်ဗျား မက်မယ် မထင်ဘူး။ ခုနေ တအိမ်လုံး ခင်ဗျား ယူလိုက်ပါတော့လို့ ကာယကံရှင်က ဆင်းပေးလဲ ခင်ဗျား လာနေနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်က ဗွက်ထူ ခြင်ထူတယ်ဗျ။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ မွေးပြီး ဒီတိုင်းပြည်မှာ ကြီးသွားပေမယ့် ခုလောက်ဆို ဖုံနံ့ မခံနိုင်၊ ခြင်မြင်မခံနိုင် ခင်ဗျား ဖြစ်နေရောပေါ့။ ခင်ဗျားဇနီးကတော့ မြန်မာပြည် ပြန်လာလည်တုန်းက ပြောရှာပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဇနီးမောင်နှံ ကိုယ်လာမနေနိုင်တဲ့ အိမ်တလုံးကို အမွေလှမ်းလုနေတဲ့ကိစ္စကို။ ဒီအိမ်ကို ရရင် ဒေါ်ခင်ကြည်ပြတိုက် ဖွင့်မလို့ပါတဲ့။ ကျနော်တို့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးကတော် အသည်းအသန် ဖြစ်နေတုန်းက ခင်ဗျားတို့ လင်မယား တခေါက်ကလေးမှ လာကြည့်ဖော် မရပါလားဗျာ။ ဒေါ်ခင်ကြည်ဟာ မမာမကျန်းဘဝနဲ့ လပေါင်းများစွာ ကြာပြီးမှ ဆုံးသွားတာပါ။ ခင်ဗျားတို့ အမေ၊ ယောက္ခမကို လာကြည့်ချင်သပဆို လာဖို့ အချိန်တွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒေါ်စုလို အနီးကပ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့လောက်ထိ မပြောသေးဘူးနော်။ ဧည့်သည်တွေ့ လာတွေ့ချင်ရင်တောင် လာတွေ့ဖို့ အချိန်တွေ အများကြီးပါ။ အလုပ်များလို့ အချိန်မရှိဘူးလို့တော့ ခင်ဗျား မပြောနဲ့လေ။ အမွေလုဖို့ အမှုဖွင့်ပြီးမှ ခင်ဗျားတို့ ဇနီးမောင်နှံ မြန်မာပြည်ကို အလည်အပတ်ဆိုပြီး အတောမသတ် လာနေတာကျတော့ အချိန်တွေ ဘယ်က ပြန်ထွက်လာလဲ။ တချိန်တုန်းက အဝေးကနေ နှစ်တိုင်း ပန်းခြင်းလေး တခြင်းပဲ မသဒ္ဓါရေစာ လှမ်းပို့နေကျ ခင်ဗျားအဖေရဲ့ အာဇာနည်နေ့မှာ ခုမှ ဘာလို့ လင်မယားတွဲပြီး ပန်းခွေတွေချပြ၊ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံပြီး အစိုးရ သတင်းစာတွေမှာ ထည့်ကြ လုပ်နေတာလ။ဲ ဒေါ်ခင်ကြည် လရှည် မမာတုန်းက မလာခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားတို့ လင်မယား ဒေါ်ခင်ကြည်ဆုံးပြီဆိုမှ ရောက်ချလာတယ်။ ရက်လည်တဲ့အထိပဲ နေပြီး ချက်ချင်း ပြန်သွားတယ်။ ဒေါ်ခင်ကြည် ဆုံးတာ ၈၈ ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းကပါ။ ၈၈ အရေးအခင်းပြီးလို့ လူတွေ ထောင်ချီ သေရတာ လပိုင်းလေး ရှိသေးတယ်။ မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်ကို ခင်ဗျားရောက်တော့ ခင်ဗျား ပထမဆုံး ပြန်ရှူရတဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံလေထဲမှာ သွေးညှီနံ့တွေ ပါတယ်လို့ မထင်မိဘူးလားဗျာ။ အဲဒီအချိန်က ခင်ဗျားအမေအိမ်ကမှ မသာအိမ် မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာတပြည်လုံးကိုယ်နှိုက်က ကိုယ့်လူမျိုးတွေ သောက်သောက်လဲ သေထားရတဲ့ မသာအိမ်ကြီးပါ။ ဒီမသာအိမ်ကြီးကို ပြန်လာပြီး မသာရှင် မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဝမ်းနည်းစကားလေး တချက်တောင် အားပေးနှစ်သိမ့်ဖော် မရဘဲ ခင်ဗျား ချက်ချင်း ပြန်ထွက်သွားတယ်နော်။ ခင်ဗျားဟာ ကျနော်တို့အတွက် အိမ်ရှေ့မင်းသားတပါး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ကိုအောင်ဆန်းဦး။ ၈၈ အရေးအခင်းဖြစ်ခါနီးမှာ ကျနော်တို့ မင်းလောင်းလို မျှော်ခဲ့ကြတာ ခင်ဗျားကိုပါ။ ဒေါ်စု မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ အင်္ဂလန်ဟာ ကျနော်တို့ကို ကျူးကျော်ခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီလုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဆိုတဲ့ အငြှိုးနဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို လက်ထပ်ထားတဲ့ ဒေါ်စုအပေါ် ကျနော်တို့ မမျှော်လင့်ခဲ့ကြဘူး။ ကျနော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သားကြီးဩရဿ ခင်ဗျားဟာ ခေါင်းဆောင်ငတ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာပြီး ကယ်တင်မှာပါဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ခင်ဗျားကို ကျနော်တို့ မင်းလောင်းမျှော် မျှော်ခဲ့ကြတယ်။ ခုချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့ ဇနီးမောင်နှံ အိပ်မက်မက်နေတဲ့ မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် နေရာဟာ လိုချင်ခဲ့ရင် တချိန်တုန်းက ခင်ဗျားအတွက် အဆင်သင့်ပါ။ ခင်ဗျားဇနီးက ဒီအိမ်မှာ လက်ရှိနေနေတဲ့ ဒေါ်စုကို ဖယ်ပြီး ဒေါ်ခင်ကြည် ပြတိုက် ဖွင့်ချင်လို့ပါ ဆိုတာကို အလိုလိုက်ရအောင် ခင်ဗျားဇနီးက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ရော၊ ဒေါ်ခင်ကြည်နဲ့ရော ဘာများ ဆိုင်လို့လဲ တဆိတ် ရှင်းပြပါလားဗျာ။ သရဖူ မဂ္ဂဇင်းနဲ့ လုပ်တဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဖေဖေဗိုလ်ချုပ်လို့ သုံးသွားတာတော့ သတိထားလိုက်မိပါရဲ့။ ခင်ဗျားဇနီးဟာ သူ တခါမှ မမြင်ဖူးလိုက်တဲ့ ယောက္ခမကို ဖေဖေဗိုလ်ချုပ် ခေါ်တာတော့ ဘယ်လို ခံစားပေးရမှန်း ကျုပ် နားမလည် နိုင်တော့ဘူး။ ဒေါ်စုတောင် သူ့အဖေကို ဖေဖေလို့ သုံးတာပဲ သိတယ်။ ဖေဖေဗိုလ်ချုပ်လို့ ခေါ်တာ မကြားမိဘူးဗျ။ ဒေါ်စု ဖအေကို ချွေးမလောက် မချစ်ဘူး ပြောရင်တော့ ခမျာ ခံရရှာမှာပဲ။ ယောက္ခမ မမာတုန်းက ဘယ်နား ရောက်နေမှန်း မသိတဲ့ ချွေးမက ယောက္ခမ သေမှ ဒီအိမ်ကို ပြတိုက်ဖွင့်ဖို့ အကြောင်းပြပြီး သမီးဆီက အမွေလုခိုင်းတာတော့ ခင်ဗျား မ,ဘက်လိုက်လို့ မိုက်ဘက် ပါပြီထင်တယ် ကိုအောင်ဆန်းဦး။ ထင်တာ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ သေကို သေချာတာပါ။ ကျနော်တို့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေမှာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အကျင့်တခုက မိသားစုကိစ္စ အားလုံးကို သူတို့ ဦးဆောင် ကိုင်တွယ်နေရင် တောင် အိမ်ထောင်ဦးစီးနေရာမှာတော့ ယောက်ျားကိုပဲ စာရင်းပေးတတ်တဲ့ အကျင့်ပါ။ ဦးဆောင်သလားတော့ မမေးနဲ့၊ သူတို့ယောက်ျားတွေ သားသမီးတွေ ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ ပေါင်းရမယ် မပေါင်းရဘူးကအစ ယောက်ျားရဲ့ လက်ဖက်ရည်ဖိုး ဆေးလိပ်ဖိုး ကိစ္စပါ သူတို့ အကုန် ဆုံးဖြတ်တယ်။ စိတ်မထင်ရင် ညမထွက်ရ လို့ ယောက်ျားကို သူတို့ မာရှယ်လော ထုတ်ရင်လဲ ခင်ဗျားမိတ်ဆွေ နအဖ၊နဝတတွေရဲ့ ဘာပုဒ်မ ညာပုဒ်မ အမိန့်တွေထက်တောင် ဆိုးသေး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ယောက်ျားတွေကို မယားကြောက် ပြောရင်တော့ သူတို့ မခံနိုင်ဘူးဗျ။ ယောက်ျားက သိပ်ညံ့ပြီး ကျမက သိပ်သိပ်တော်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ အချိုးမျိုးလဲ သဘောထားပြည့်တဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ မချိုးတတ်ဘူး။ ခင်ဗျား သဘောထားကြီးပြီး မိန်းမအပေါ် မာနမထားတတ်ကြောင်း ပြချင်ရင် တခြားနည်းနဲ့ ပြလို့ ရပါတယ်။ မိန်းမက တိုင်းပြည်ကို ပြဿနာရှာနေတာကိုတောင် ကြံရာပါပြီး ပါရမီ ဖြည့်ပေးတဲ့ နည်းနဲ့တော့ မြန်မာယောက်ျားတွေရဲ့ သိက္ခာကို မချပါနဲ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ယဉ်ကျေးမှုတခု ရှိပါတယ် ကိုအောင်ဆန်းဦး။ မြန်မာပြည်ကို အရိုင်းအစိုင်းတိုင်းပြည်လို့ ခင်ဗျား မြင်နေရင်တော့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ စကားလုံး သုံးလိုက်တာ ကျနော်တို့ အရိုင်းအစိုင်းတွေနဲ့ မတန်ဘူးလို့ ခင်ဗျား ပြောချင်မလားပ။ဲ ကျနော်ဆို ကားစုတ်မပြောနဲ့၊ စက်ဘီးစုတ်တောင် မဝယ်နိုင်တဲ့လူဆိုတော့ ကျနော်လို မြန်မာပြည်သား ငမွဲက ခင်ဗျားကို သခင်ကြီးလို့ မခေါ်ပဲ ခင်ဗျားတွေ ကျနော်တွေနဲ့ ပြောနေတာကို ခင်ဗျား နာမလားလဲ မပြောတတ်ဘူးဗျ။ ကျနော်တို့ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာက အားနည်းသူတွေ၊ ကူညီဖို့ လိုအပ်နေသူတွေကို သက်ညှာရတဲ့၊ အလိုက်သိ ဖေးမ,ပေးရတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ကက်ဆက် အသံကျယ်ကျယ် ဖွင့်နေကျ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေတောင် ကလေးတွေ စာမေးပွဲရက်ဆိုရင် ကက်ဆက်သံ လျှော့ပေးရပါတယ်။ ရပ်ကွက် ဘုံကထိန်အတွက် အလှူငွေ ကောက်ဖို့လာတဲ့ အရပ်လူကြီးတွေလဲ မသာအိမ်ဆို မကောက်ဘဲ ချန်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့အပူနဲ့သူမို့ ဖေးမတဲ့ အနေနဲ့ပါ။ မြေနိမ့်လှံစိုက် မလုပ်ရတာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုပါ။ ခင်ဗျားနှမကို သေအောင် မနာလိုဝန်တိုဖြစ်ပြီး မုန်းနေဦးတော့၊ သူ ဒီလောက် အကျယ်ချုပ်တွေ ဆက်တိုက်ခံနေရတဲ့ အချိန်မှာ နေစရာ အိမ်ပျောက်အောင် အမွေလုစရာလားဗျာ။ ဒီအိမ်က ဆင်းပေးရရင် ဒေါ်စုမှာ သာွ းနေစရာ အင်းစိန်ထောင်ပဲ ရှိတော့တာ ခင်ဗျားလဲ အသိပါ။ မြင့်ဆန်းအောင်နဲ့ မောင်ထိန်လင်းက သူတို့အမေအတွက် အိမ်တလုံးတော့ ဝယ်ပေးနိုင်မှာပါလို့ ခင်ဗျား ပြောမလို့လား။ အရှင်လတ်လတ် သွားလေသူ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် အာဏာရှိတုန်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါက်တာမိုက်ကယ်အဲရစ် သူ့ဇနီးဆီ ပို့တဲ့ အစားအသောက် ပါဆယ်စာရင်းကို ဖတ်ပြလို့ ဆတ်ဆတ်ထိ မခံနိုင်တဲ့ ဒေါ်စုက မိသားစုဆီကတောင် ဘာမှ လက်မခံတော့လို့ ဒေါက်တာမိုက်ကယ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရတာ ခင်ဗျား မှတ်မိမှာပါ။ (နှုတ်ခမ်းတလန် ပန်းတလန် ဒီလို ရန်ထောင်ရ၊ စောင်းရ မြောင်းရမှာ မရှက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့ မနာလိုရင် မနာလိုသလို ပြဿနာရှာတတ်တဲ့ အကျင့်တွေကိုတော့ ဗိုလ်တေဇရဲ့ သားကြီးဩရဿ အတုမရစေချင်ဘူးဗျာ။) ဒီတော့ သားနှစ်ယောက်ပေးတဲ့ အထောက်အပံ့ကိုလဲ နိုင်ငံခြားအကူအညီယူတယ် အစွပ်စွဲ မခံနိုင်လို့ လက်မခံဘူးဆိုရင် ဒေါ်စု ဘယ်သွားနေရမလဲ။ နေစရာ အိမ်မရှိရင် သူ့ကို ထောင်ထဲ ထည့်ထားပါလို့ စစ်အစိုးရကို ခင်ဗျား တဖက်လှည့်နဲ့ ခိုင်းနေတာလား။ ခင်ဗျားဇနီးဟာ အင်ဒီရာဂန္ဒီရဲ့ ချွေးမတွေ ယောက္ခမမျက်နှာ လင်သားမျက်နှာနဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်ထဲ ရောက်လာသလို မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နယ်ထဲ ဝင်ချင်၊ နေရာယူချင်တဲ့ စိတ်ကလေး ရှိနေမှန်း ကျနော် သတိထားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနာခံမှ အသာစံရ ဆိုတဲ့ မြန်မာရိုးရာ စကားပုံလေးကိုတော့ ခင်ဗျားဇနီးကို ပြောပြပြီး အကြံပေးပါဦးဗျာ။ တိုင်းပြည် ဒုက္ခရောက်နေတုန်းတော့ မြန်မာပြည်ကို တိုးရစ်လာ လာလည်၊ ပြန်သွား လုပ်နေပြီး စစ်အစိုးရ ဖြစ်ချင်တဲ့ ကန့်သတ် ပါလီမန် ပေါ်လာပြီးတဲ့ တချိန်ကျမှ အမတ်လောင်းအဖြစ် အဆင်သင့် လာအရွေးခံမယ် စိတ်ကူးယဉ်နေရင်တော့ ကျနော် ဗေဒင်ဟောလိုက်မယ်။ မယုံမရှိနဲ့၊ ရှုံးမှာ သေချာပေါက်ဗျ။ ခင်ဗျားဇနီးက အင်တာဗျူးမှာ သရဖူ မဂ္ဂဇင်းကို ဖြေရှာတယ်။ အလှအပ ပစ္စည်းဆို အယ်လစ်ဇဘက်ကာတန်ပဲ သုံးတယ်တဲ့။ အယ်လစ်ဇဘက် ကာတန်ဆိုတာ ခင်ဗျားဇနီး ပြောလို့ ကမ္ဘာကျော် အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတခု ဖြစ်မယ်လို့ မှတ်သားရပါရဲ့။ အပျိုပေါက် ကတည်းက နိုင်ငံခြားမှာ နေခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ အဘွားကြီး ဒေါ်စုဆီကတော့ အယ်လစ်ဇဘက်ကာတန်တွေ ဘာတွေအကြောင်း ပြောသံ တခါမှ မကြားမိဘူးဗျ။ အဘွားကြီးက ပန်းတော့ ကြိုက်တယ်။ သနပ်ခါးလဲ ကြိုက်မယ်ထင်တယ်။ ရွှေဘိုသနပ်ခါးခေါက်နဲ့ ရှင်မတောင် အပွေးတုံးနဲ့ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ မေးရင်တော့ အဘွားကြီး ဖြေနိုင်မှာပါ။ အယ်လစ်ဇဘက် ကာတန်တို့ ရယ်ဗလွန်တို့အကြောင်း ဆွေးနွေးရင်တော့ ခင်ဗျားဇနီးလို သွက်သွက်လက်လက် မပြောနိုင်ရှာဘဲ မျက်စိပေကလပ် ပေကလပ် ဖြစ်နေရှာမယ့် ကျနော်တို့ အဘွားကြီးကို မြင်ယောင်တယ်။ သနပ်ခါးအကြောင်း မေးရင်တောင် အဘွားကြီးက ခုနေ သိပ်ပြောချင်မှ ပြောတော့မယ်။ ၅ဝ ကျော်ကတည်းက ဒေါ်စုဟာ နိုင်ငံရေး တဖက်၊ ဘုရားတရားတဖက် ဘဝခရီး ဆက်နေပြီလို့ သိရလို့။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ အသက် ၅ဝ ကျော်တွေ ဘုရားတရားလုပ်တာ ရှက်စရာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ၅ဝ ကျော်တဲ့အထိ ဘာသာရေးကို ပစ်ပယ်ပြီး ကာလသားသမီးလို ကဲနေရင်သာ ချာတိတ်တွေကအစ မကြည်ညိုတာ။ ခင်ဗျားလဲ ရင့်ကျက်ပါတော့ ကိုအောင်ဆန်းဦးရေ။ ဗိုလ်ချုပ်သားလေးဆိုပြီး အဖေ့မျက်နှာနဲ့ ခွင့်လွှတ်ရအောင်ကလဲ ခင်ဗျား ကျနော်တို့ထက် အသက်ကြီးပါတယ်။ ကိုအောင်ဆန်းဦးရေ… ခင်ဗျားဇနီးက ဆောင်းပါးထဲမှာ ရေးတယ်။ ကျမဟာ အဖြူတွေကြားမှာ အဝတ်အစား ဝတ်တတ်သူလို့ ချီးမွမ်းတာ ခံရတယ်တဲ့။ ခင်ဗျားဇနီးက အနောက်တိုင်းသားတွေကို အဖြူတွေလို့ သိပ်အထင်ကြီးပုံ ရတယ်။ မြန်မာပြည်က နေပူထဲ ကြီးခဲ့ရတဲ့ ကျနော်တို့အသားကတော့ ညိုသဗျ။ အဝတ်အစား ဝတ်တတ်သူအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂုဏ်ယူဖော်ပြတဲ့ မစ္စက် အောင်ဆန်းဦးဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ရှိုးကောင်းချင် ကောင်းပါစေ၊ ကျနော်တို့တော့ ငါးပိတော ဖုန်တောထဲမှာ တသားတည်း နေတဲ့ ကျနော်တို့ အဘွားကြီး ပဲ ချစ်တယ်ဗျာ။ သူက ကျနော်တို့နဲ့ အတူ ရှိတာကိုး။ ကားမရှိတဲ့ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တွေကိုလဲ သူ လာတတ်တယ်။ ကားစုတ်ရှိတဲ့ လမ်းဆို မနေဘူးဆိုတဲ့ ခင်ဗျားလိုများ အဆင့်အတန်း မြင့်ရရင်တော့ ဒေါ်စုခမျာ စစ်အစိုးရလုပ်မှ အကျယ်ချုပ်ကျမှာ မဟုတ်ဘဲ သူ့ဟာသူ အိမ်ထဲကအိမ်ပြင် မထွက်ဘဲ အကျယ်ချုပ် လုပ်နေဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အမေရိကန်ပေတံနဲ့ တိုင်းရင် ကားစုတ် မရှိတဲ့ လမ်းဆိုတာ ရွှေတောင်ကြားတောင် ပါချင်မှ ပါမှာဗျ။ အဘွားကြီးနေတဲ့ လမ်းကတော့ ဝေးရော့ပဲ။ ဒီက ကားသစ်တွေတောင် ခင်ဗျားတို့ အမြင်မှာ မော်ဒယ်အောက်နေပြီကိုး။ ခင်ဗျား ဘာလို့များ ကားစုတ်တွေ ရှိတဲ့လမ်းက အိမ်စုတ်ကြီးကို အမွေလာလုပါလိမ့်ဗျာ။ ကိုအောင်ဆန်းဦးရေ။ တချိန်က မြန်မာတွေ မင်းလောင်းမျှော် မျှော်တာ ခံခဲ့ရတဲ့ ခင်ဗျား… အမျှော်ကြီး မျှော်နေတုန်းကတော့ မလာခဲ့ဘဲ၊ ဒေါ်ခင်ကြည်သေလို့ လာတာတောင် ဧည့်သည်လာ လာပြီး ဧည့်သည်ပြန် ပြန်သွားခဲ့တဲ့ ခင်ဗျား… ခုချိန်ကျမှ ခင်ဗျားဇနီးအတွက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပလ္လင် အဆင်သင့် ဖြစ်နေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်နောက်ကျသွားပါပြီဗျာ။ တိုင်းပြည် က တချိန်တုန်းက ခင်ဗျားကို သိပ်ပေးချင်ခဲ့တဲ့ နေရာကို ခုမှ ခင်ဗျားဇနီး ယူစေချင်တယ် ဆိုရင်လဲ ခင်ဗျားရဲ့ မယားရှိခိုး သွားမကျိုး သဘောထားကို မဝေဖန်ချင်ပေမယ့် ခင်ဗျားမိန်းမအတွက် မပြောနဲ့၊ ခင်ဗျားအတွက်ဆိုရင်တောင် ခုမှတော့ မရနိုင်တော့ဘူး၊ သိပ်နောက်ကျသာွ းပြီလို့ ပြောပါရစေ။ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်တုန်းမှာ ပေါ်မလာခဲ့တဲ့ အိမ်ရှေ့မင်းသား ခင်ဗျားဟာ ခုတော့ နန်းမရခင်က နန်းကျသွားခဲ့ပါပြီ။
(Note မှာ မပေါ် လို့ ထပ်တင်လိုက်ပါတယ်)
Credited to Thein Win on FB
တစ်ယောက်တစ်ဝက်ဆိုပြီး အမိန့်ချလိုက်တယ် ဆိုတော့ နိုင်ငံခြားသားများ အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရသွားပြီလားဆိုတာ သိချင်သား ..
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကွန်မင့် ဗျား……
“နိုင်ငံခြားသားများ အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ” လုံးဝ မရှိပါဘူး။
အဲဒါကို ဖောက်ပြီး တရားစီရင် ရင် အဲဒီ အမိန့်ချသူ ကို ပြန်ပြီး တရားစွဲ ပါမယ်။
အရီးလတ် ပေါက်ကွဲတာ ဒုတိယ အကြိမ်မြင်ရခြင်းပါ .. :grin:
ကျွန်မ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဦးညွှတ်ပြီး လေးစားတာထဲမှာ သူ့ မိခင် ကို တာဝန်သိသိ နဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြန်လာပြီး ကို ပြုစု ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ မြင့်မြတ် တဲ့ သမီးကောင်းစိတ်ဓာတ် လဲ ပါပါတယ်။
နိုင်ငံခြားက နေ ပိုက်ဆံပေးပြီး အကူငှား ထားပေးလဲ ရတာပါဘဲ။
သမီးတိုင်း မကျေနိုင်တဲ့ တာဝန် ကို သူ ကျေ အောင်ထမ်းခဲ့တာပါ။
ဒီအချိန် မှာ ဘယ်သူဟာဘာ ဆိုတာ လူတိုင်း သိမြင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ။
ဒါကို ဘာကြောင့်မို့ လူယုတ်မာ အဖြစ်ခံပြီး နာမည်ဆိုး နဲ့ အသက်ရှင် သွား ချင် တာလဲ ဆိုတာ ကျွန်မ တော့ မစဉ်းစား နိုင်အောင်ပါဘဲ။
ငွေလဲ မလိုပါဘဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ နေမဲ့ နိုင်ငံသား လဲ မဟုတ်ပါဘဲ ဒီလို လုပ်တာဟာ အတော်လေး သိမ်ဖျင်း တဲ့ စိတ်ဓာတ် နဲ့ လုပ်ရပ်ပါဘဲ။
တစ်ယောက်တည်း ရှိတဲ့ ကိုယ့် ညီမ လေး ကို ဒီလောက်တောင် မနာလို ခြင်းတွေ နဲ့ ဖုံး နေတာကတော့ တရား မဲ့လွန်းပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်သောသူ တစ်ယောက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ မှာ မြေ၊ အိမ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိရ ဆိုတဲ့ ဥပဒေ ရှိပါတယ်။
ဥပဒေ ကို စောင့်သိကြပါ။
ကျနော်တို့တော့ ငါးပိတော ဖုန်တောထဲမှာ တသားတည်း နေတဲ့ ကျနော်တို့ အဘွားကြီး ပဲ ချစ်တယ်ဗျာ။ သူက ကျနော်တို့နဲ့ အတူ ရှိတာကိုး….
စာမဖတ်ဘဲ ခိုးချပြီး စာမေးပွဲအောင်၊ အကပ်ကောင်းလို့ ဒီရာထူးရလာတဲ့ တရားသူကြီး ထင်ပါရဲ့ဗျာ..
အဖွားဂျီး ပြည်ပ ခရီးစဉ်တွေမှာ မဖြစ်ဘူးတာတွေဖြစ်နေသလားဘဲ
ရောင်းရင်လည်း ရောင်းပစေကွာ ဘယ်ကောင်ဝယ်မလဲ ဖဲ့ပဘလိုက်ကွာ
သဂျီးမင်းအဆိုအရတော့ မိဘပစ္စည်း သားသမီးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသပေါ့
မှန်၏။ကျနော်လဲ ဒီလူကြီးကို ကြည့်မရတာ။
“ဒီမသာအိမ်ကြီးကို ပြန်လာပြီး မသာရှင် မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဝမ်းနည်းစကားလေး တချက်တောင် အားပေးနှစ်သိမ့်ဖော် မရဘဲ ခင်ဗျား ချက်ချင်း ပြန်ထွက်သွားတယ်နော်။ ခင်ဗျားဟာ ကျနော်တို့အတွက် အိမ်ရှေ့မင်းသားတပါး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ကိုအောင်ဆန်းဦး။ ၈၈ အရေးအခင်းဖြစ်ခါနီးမှာ ကျနော်တို့ မင်းလောင်းလို မျှော်ခဲ့ကြတာ ခင်ဗျားကိုပါ။ ဒေါ်စု မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။”
တကယ်ပါပဲ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အာဏာရှင်နေဝင်းအစိုးရကို သပိတ်တိုက်ပဲဝင်နေတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာ
တို့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သားဆိုပြီး အားကိုးတကြီးနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ဦးဆောင်စေချင်လွန်းခဲ့တယ်။
နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သူ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ရလာဒ်ကတော့ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးမှာတက်ကြွစွာပါဝင်
ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားခေါင်ဆောင်တွေက ဦးအောင်ဆန်းဦးကို ဖခင်အမွေမခံထိုက်တဲ့ သားအဖြစ်သိရှိသွားလို့တော်တော်ကို
စိတ်ပျက်သွားခဲ့ကြတယ်..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ အမျိုးသမီးဖြစ်လို့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာ
အင်း…အခုကိစ္စမှာ တရားသူကြီးက ဘာစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး ဒီလိုအမိန့်ချမှန်းမသိပေမယ့်
မိဘအမွေဆိုတာက.. ခံထိုက်မှ စံရမှာပါ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သည် အချောင်စိတ်ဓါတ်မရှိ ဒေါ်ခင်ကြည်သည်မေတ္တာရည်ကြီးမားပြီးသည်းခံခွင့်တတ်သူ မည်သည့်အခွင့်အရေးမှမတက်မက်ခဲ့သည့် မြန်မာအမျိုးသမီးတိုင်း စံထားရမည့် မြန်မာ့သမီးကောင်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ ဒီလိုမိကောင်းဖကောင်းက မွေးလာတဲ့အောင်ဆန်းဦးဆိုသူတယောက် ဓနရှင်အချောင်ဝါဒဆွဲကိုင်ပြီး မြန်မာပြည်မှာအမွေလုတိုက်ပွဲလာဆင်နွဲ နေခြင်းမှာ ဇနီးဖြစ်သူ၏ လော်မာမှုနောက်သို့ ဆီဆုံနှင့်တွဲသလို ထမီစနှင့်နဖားကြိုးထိုးခံနေရပြီးရုန်းနေရလို့ထင်ပါရဲ့
( ၁ ) မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်သောသူ တစ်ယောက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ မှာ မြေ၊ အိမ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိရ ဆိုတဲ့
( ၂ ) တရားသူကြီးသည် ဥပဒေကို ကိုးကားရန်မလို မိမိသဘောဆန္ဒအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပြီလား။
( ၃ ) လူအများ မသိသေးသော အကြောင်းအရာ ကြောင့်လား။ ဥပဒေတစ်ခုခု ကြောင့်လား။
သိတဲ့သူများ ကူညီကြပါ။နောက်ထပ်မတွေးချင်တော့လို ့ပါ။
အင်း ခက်တော့ခက်ပြီ တချို့ဆိုဒ်တွေမှာ တစ်ယောက်တစ်ရာငွေစုပြီး ဦးအောင်ဆန်းဦးကိုငွေပြန်အမ်းဖို့ လုပ်ကြမယ်လို့ လဘက်ရည်ဆိုင်မှာကြားခဲ့တယ် အနော်တို့လဲစုပြီး အဲဒီလူကြီးကို ဆိုမာလီမှာခြံတစ်ခြံဝယ်ပေးရရင်မကောင်းဘူးလားဟင်
အခု.. ဦးအောင်ဆန်းဦးတို့လင်မယားအကြောင်းလည်း… သေသေချာချာသိပုံမပေါ်ပါ..။
ပို့စ်ကို.. မကြာခင်.. ပိတ်လိုက်မယ်ဖြစ်ပါကြောင်း..။
” ဦးအောင်ဆန်းဦး.. မြန်မာပြည်မှာနေသည်..။”
ဦးအောင်ဆန်းဦး ကောင်း/မကောင်းတော့ မဝေဖန်တတ်ပါ…..ဒါပေမဲ့ သကြီးပြောတာ
ဟုတ်ပါတယ်…. ဦးအောင်ဆန်းဦး မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့မှာတင်ရှိပါတယ်….. နောက်ပြီး သူယောက်ဖ ဦးဝင်းထင်ကျော် ထောင်ထားတဲ့ WHK Company ကိုလည်း ခဏခဏအဝင်အထွက်ရှိမြဲပါ။
သွားလိုက်ပြန်လိုက်ခဏခဏ လုပ်နေတာကိုပြောတာပါ။ ဒီမှာပဲနေတယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူးဗျာ…..
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက် စေတဲ့ မှတ်ချက် ပေးခဲ့ မိတာ ကို တောင်းပန်ပါတယ် သူကြီးရယ်။
ကျွန်မ အနေနဲ့ ကတော့ အင်တာနက် ထဲ က သူများ အပြောနဲ့ တော့ ဝေဖန်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ မတရားမှု တစ်ခု ကို သိသိကြီး နဲ့ ကြားမှာ နေရင် မတရားလုပ်သူကို ပံ့ပိုးခြင်း တစ်မျိုးပါဘဲ။
ဒီ ကိစ္စမှာ နွယ်နေတဲ့ ပယောဂ တွေကို ကျွန်မ Personally ကို သိပါတယ်။
ကျွန်မ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်က နာလို့ ပြောတာထက် ဒီအချိန်မှာ တောင် ဥပဒေ ကို တကယ်ဘဲ လက်တစ်လုံးခြား လှည့်နေလို့ ရသေးတာ ကို စိတ်မကောင်းတာပါ။
သူကြီး ရဲ့ နေရာမှာလဲ ကျွန်မ ဝင်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
ဒီတော့ ဖျက် လိုက်တာ အကောင်းဆုံး ပါဘဲ။
အဲဒီအပေါ်လင့်ခ်မှာ.. လွန်ခဲ့တဲ့.. ၂နှစ်ကသတင်းနဲ့..ဝေဖန်ချက်လေးဖတ်ကြည့်စေလိုပါတယ်..အရီးလတ်ရေ..
အပေါ်ကပိုစ့်စ်လည်း.. ဘာ်သူကဘယ်လိုရေး.. ကူးတင်သလည်းမသိပေမဲ့.. အဲဒီကူးတဲ့နှစ်တင်..
Monday, 28 July 2008 လို့တွေ့ရပါတယ်..
အနည်းဆုံး.. ၄နှစ်ကြာနေတဲ့.. စာပါ…
ဒီမောင်နှမ၂ယောက်ရဲ့.. အိမ်ကိစ္စလည်း.. ဘယ်သူမှ.. တင်လာတာမတွေ့ချိန်.. ပြန်ပြီး..” နှူး”တာဟာ.. ရည်ရွယ်ချက်တခုခုများ.. ရှိနေသလား…ရယ်လို့…
သဂျီးရေ- နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာနေတဲ့အမှုကို ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း ခရိုင် တရားရုံးကနေ အမိန့်ချမှတ်လိုက်လို့ ဒီပိုစ့်က အစပြန်ဆွဲလာတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
(တရားရုံးရဲ့ အမွေ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆုံးဖြတ် ချက်အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အနေနဲ့ အယူခံဝင် မယ်လို့ ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းက RFA ကို ဒီကနေ့ ပြောဆိုပါတယ်)
လို့ သစ်ထူးလွင်မှာ ဒီကနေ့ ၂၅. ၆. ၂၀၁၁ မှာ တင်လာပါတယ်။
ဦးအောင်ဆန်းဦးက.. အမေရိကနိုင်ငံသားကိုများ.. စွန့်လွှတ်လိုက်လေပြီလားရယ်လို့.. သံသယတော့ရှိပါတယ်..
သူကြီးဖျက်မယ်ဆိုတာနဲ့ ပိုစ်အသစ်တင်လိုက်မိတယ် ။ မဖျက်ဘူးဆိုရင်တော့ သူကြီးရေ ကျွန်တော့်ပိုစ်ဖျက်ပြီး ဒီအောက်မှာဘဲ ပြန်သွင်းပေးပါခင်ဗျာ။
ပြောရရင်.. ဒီနေ့ပဲ.. မြောင်းမြဒေါ်ချိုမိသားစုက.. အဲဒီ(ဦးအောင်ဆန်းဦးတို့နေတဲ့) ဆန်ဒီယေးဂိုဖက် လယ်လယ်သွားမယ်..ပြောထားတာ..
ဒဂျီးတို့များ တိုင်းပြည်အတွက် နဲနဲပါးပါး အနစ်နာခံမယ်မစဉ်းစားဘူး။ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် ဒီတစ်ချိန် မပြရင် ဘယ်အချိန်ပြမလဲ
အဓိက သူလက်ရှိယူထားတဲ့ မိန်းမရဲ့နောက်ကြောင်းကိုဟိုးကထည်းကအမေရိကန်ရောက်ပြီးနေတဲ့မြန်မာ
တွေသိရင်တင်ပေးစေချင်တယ်၊ တော်တော်ဆိုးဆိုးအပုပ်နံ့တွေကြားဖူးလို့ နားကြားမို့လို့၊မသေခြာလို့မရေးတော့ပါ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုပေမည့်– သည်လိုအမွေခွဲခိုင်းတာရဲ့နောက်ကွယ်အကြောင်းတွေဟာ၊ဒေါ်စုဘုံပျောက်ဘို့၊တရားဖြစ်ပြီးအစ်ကိုနဲ့တောင်အမွေလုတဲ့ ဒေါ်စု ဆိုတဲ့ အမြင်ကို လူတွေမြင်အောင်ဖန်တီးတဲ့ တိုက်ကွက်ဖြစ်နေတယ်။
သာမန်အမွေလုမှုဖန်တီးတာမဟုတ်ပါဗျား။ ဒါ့ကြောင့် သဘာဝအမွေမှုလို့မမြင်ပဲ ပြည်သူတွေစောင့် ကြည့် ဘို့လိုတယ်။
မိသားစုတစ်စုမှာ စုန်းပြူးတစ်ယောက်တော့ပါတယ်ပြောကြတယ်။ ဒါဆို ဒီဘဲက စုန်းပြူးပဲ။ ဘယ်လို နတ်ခတ်နဲ့မွေးလာလဲမသိဘူး။ တော်တော်ဆိုးတဲ့သူပဲ
Dog ဒွေး နက္ခတ်
သူကြီးပြောတဲ့ မြောင်းမြဒေါ်ချိုက မုန် ့တီရောင်းသလားဗျာ။
ဒေါ်စု အမြဲ တဖွဖွ ပြောနေတဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာ အရေကြီးတယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း
ဒါက ဥပဒေနဲ့ဘဲ ဖြေရှင်းရမှာပါ၊ ဒီတစ်ခါ လွှတ်တော်မှာ တရားစီရင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်
တဲ့ ဥပဒေကြမ်း တင်သွင်းဖို့ ရှိတယ်ဆိုပြီး ဂျာနယ်မှာ ဖတ်ရသလားလို့.. တရားသူကြီးက
ဥပဒေနဲ့အညီ စီရင်ဆုံးဖြတ်မှု မရှိခဲ့ဘူး ဆိုရင်လည်း သူ့ကို ဥပဒေနဲ့ အညီ အရေးယူရပါမယ်